Elon Musk သည် Bitcoin အတွက်ပိုမိုကြီးမားသောအစီအစဉ်ရှိနိုင်ပါသလား။ တစ် ဦး က crypto လေ့လာသုံးသပ်သည်
Tesla အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Elon Musk သည်မကြာသေးမီလများက Bitcoin ကိုမကြာသေးမီကဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲတွင်အဓိကအချက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ တက်စလာသည် Bitcoin ကိုငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအဖြစ်လက်ခံလိမ့်မည်ဟုကြေငြာသောအခါသူသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအပေါ်သူ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစတင်ခဲ့သည် ၎င်းသည်စျေးနှုန်းကိုဒေါ်လာ ၆၄၀၀၀ အထိစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့သည်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုများနေဆဲဖြစ်သော်လည်း Elon Musk ကတက်စလာ၏ Bitcoin ငွေပေးချေမှုကိုရပ်ဆိုင်းရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ Bitcoin ၏စျေးနှုန်းသည်တုန့်ပြန်မှုအရဒေါ်လာ ၄၀,၀၀၀ အောက်သို့ကျဆင်းသွားသည်။ များစွာသော Bitcoin ဝါသနာရှင်များအနေဖြင့်မူဆလင်များကိုအမြဲတမ်းစွပ်စွဲသည်k၊ Twitter အသုံးပြုသူ နှင့် CroissantEth ဟုသတ်မှတ်ထားသော crypto watcher သည် Musk သည်ပိုမိုကြီးမားသောအစီအစဉ်ရှိနိုင်သည်ဟုထင်မြင်သည်။ Tesla သည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်များကိုမြှင့်တင်ရန် $ BTC ကိုအဖြေရှာခြင်းဖြစ်နိုင်သည် တက်စလာ၏အဓိကရှယ်ယာရှင်များနှင့် Bitcoin ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး ဖြစ်သည့် Ark Invest သည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နှင့် Bitcoin သတ္တုတူးဖော်ရေးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာကိုမကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ CroissantEth ၏အဆိုအရဤအစီရင်ခံစာသည် Musk စီးပွားရေး၏ 'endgame' ကိုသဲလွန်စပေးသည်။
Ark Invest arg ကာဗွန်ကင်းပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲအရင်းအမြစ်များမှထုတ်လွှတ်သောစွမ်းအင်။
တက်စလာ၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဆိုလာပြားများ၊ နေရောင်ခေါင်မိုးများနှင့်ဘက်ထရီများဖြစ်သည်ကိုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ လေ့လာသူများအဆိုအရအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပြည်နယ် ၁၃ ခုထက်ပိုသောထုတ်ကုန်များသည်သုညထုတ်လွှတ်ရန်အတွက် ၄ င်းတို့ပြည်နယ်တွင်ရောင်းချသောမော်တော်ယာဉ်များကိုလိုအပ်သည်။ တက်စလာသည်ငွေအမြောက်အမြားရရှိသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့သုညထုတ်လွှတ်တဲ့ကားတွေကိုရောင်းပြီး "သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာခရက်ဒစ်များ" ကိုရရှိခဲ့လို့ပါ။ ဒီခရက်ဒစ်အချို့ကိုသုညထုတ်လွှတ်တဲ့ယာဉ်များမရှိသေးတဲ့မော်တော်ကားထုတ်လုပ်သူများထံရောင်းချခဲ့ခြင်းကြောင့်
ကျွန်ုပ်သည်၊ Tesla သည်လျှပ်စစ်နံရံများမှထုတ်လုပ်သောပိုလျှံသောစွမ်းအင်ကို အသုံးပြု၍ $ BTC ကိုသတ္တုတူးဖော်ရန်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်သောနည်းလမ်းကိုမကြာမီကြေငြာလိမ့်မည်။ ဆိုင်းဘုတ်များ, တက်စလာကားများနှင့်ပိုပြီး! CroissantETH က Musk ၏ SpaceX အတွက်ရည်မှန်းချက်မှာအင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင်ရေရှည်တည်တံ့သောလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည်အဓိကအားဖြင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည် BTC သည်အကောင်းဆုံးငွေကြေးဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်း၏အကြီးမားဆုံးအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုသူများစွာအားပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်များသို့ဆွဲဆောင်ရန် Bitcoin ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သူက Musk သည် FUD Bitcoin အတွက်ရည်ရွယ်ချက်မရှိဟုသူထင်သည်။ အစီရင်ခံစာအရ Bitcoin ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာနိုင်ပြီးများစွာသောသူတို့သည်စျေးကွက်သို့ပြန်လာနိုင်သည်။အဖြစ်များတတ်သည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာမြင့်တက်ခြင်း၊ Bitcoin တိုက်ပွဲများကြောင့် Gold Plummets သည်ပြင်းထန်သောခံနိုင်ရည်ကိုချိုးဖောက်ရန်အတွက် Crypto အတွက်ဘာဆက်လုပ်ရမည်နည်း။
2021-06-20 04:01:05 | ဘလောက်...
Bitcoin သည်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကပြန်လည်နာလန်ထူမှုလက္ခဏာများကိုပြသခဲ့သည်။ သုံးပတ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ဒေါ်လာ ၄၀, ၀၀၀ အထိရောက်ရှိခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အရှိန်အဟုန်ကျဆင်းသွားခဲ့ပြီးယခုအခါ DMA ၂၀၀ ခု၏ခုခံမှုကိုကျော်လွှားရန်ရုန်းကန်နေရသည်။ Bitcoin သည်တနင်္ဂနွေသို့ ဦး တည်ခြင်းအတွက်ဤအရာအားလုံးသည်ဘာကိုဆ...
ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် Ripple vs SEC အခြေချမှုသည်ယခုနှစ်တွင်ဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်ဇန်န ၀ ါရီလမှသာရနိုင်သည်။ ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူ
2021-06-20 03:57:46 | ဘလောက်...
SEC သည်မကြာသေးမီကအနိုင်ရရှိခဲ့သောတရားရုံးမှအဖြေရှာရန်နောက်ဆုံးရက်ကိုရက်ပေါင်း ၆၀ ထပ်မံတိုးချဲ့ရန်အနိုင်ရခဲ့သည်။ အဓိကမေးခွန်းနှစ်ခုဖြစ်သော XRP သည်လုံခြုံမှုရှိမရှိနှင့် Ripple တွင်မျှတသောအသိပေးမှုရှိမရှိဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးခြင်း။ Ripple ၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Securities and Exchange Commission နှင့်မကြာသေးမ...
မီးခိုးရောင်အရင့်၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်တွင် DeFi-Focused Crypto ပိုင်ဆိုင်မှု ၁၃ ခုကိုဖော်ပြသည်
2021-06-20 03:54:46 | ဘလောက်...
Grayscale သည်စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ရှိ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတိုးမြှင့်ပေးရန်ရှာဖွေနေသည်၊ နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးသတင်းများအရပိုင်ဆိုင်မှုမန်နေဂျာသည် DeFi-based cryptoassets ကိုအဓိကအာရုံစိုက်သည်။ CoinShares မှအချက်အလက်များအရ Grayscale သည်ဒေါ်လာ ၄၄. ၃ ဘီလီယံ၏ ၇၅% ကိုအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ crypto ရင်းနှီးမြှု...
Elon Musk မှ Kraken ၏စီအီးအို: သင် Bitcoin ၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာစရာများစွာရှိသည်
2021-06-20 03:50:11 | ဘလောက်...
Jesse Powell သည် Bloomberg TV ၏အင်တာဗျူးတွင် Kraken ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Jesse Powell သည် Bloomberg တွင်ရှိပြီးသူဆွေးနွေးခဲ့သည့်အကြောင်းအရာတစ်ခုမှာ Bitcoin ၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုဖြစ်သည်၊ Elon Musk ထံမှပြောဆိုမှုများကိုပယ်ချပြီး၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် Musk ကမူ Bitcoin ...
Dogecoin သည် Elon Musk နှင့် တွဲဖက်၍ system ကိုစွန့်ပစ်ခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်းခံရသည်
2021-06-20 03:45:18 | ဘလောက်...
Dogecoin သည်ဝေဖန်မှုများကိုဆက်လက်ခံယူခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် Dogecoin သည်တရားဝင်အသုံးပြုမှုကိစ္စမရှိကြောင်းနှင့်စျေးကွက်တစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားသည်ဟုယုံကြည်သောဘဏ္advာရေးအကြံပေး Ric Edelman ဖြစ်သည်။ Dogecoin သည်စျေးကွက်ထဲတွင်အငြင်းပွားဖွယ်အရှိဆုံး cryptocurrencies တစ်ခုဖြစ်ပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အမုန်းတ...
Bitcoin ၏ hash နှုန်းသည်နို ၀ င်ဘာလမှစပြီးတရုတ်နိုင်ငံတွင်နှိမ်နင်းမှုအနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် BTC ၏အနာဂတ်အတွက်ဖြစ်သည်။
2021-06-20 03:42:36 | ဘလောက်...
Bitcoin သည်တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်နှစ်ပေါင်းများစွာမှီခိုနေရပြီးနိုင်ငံ၏နောက်ဆုံးဖြိုခွဲမှုကြောင့် crypto hash rate သည်ခြောက်လခွဲအတွင်းအနိမ့်ဆုံးအဆင့်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များသည်တရုတ်နိုင်ငံမှပြောင်းရွှေ့လာကြပြီးအချို့မှာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်သည့်ကာဇက်စတန်သို့ပြောင်းရွှေ့နေထ...
Charles Hoskinson သည် Bitcoin ကိုအမှိုက်ပုံးထဲပစ်လိုက်သည်
2021-06-20 03:39:51 | ဘလောက်...
Charles Hoskinson သည်မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်သူသည် Bitcoin ကို၎င်း၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုကင်းမဲ့မှုအတွက်အမှားကျူးလွန်ခဲ့သည်။ သူသည် Elon Musk အား Cardano သို့မဟုတ်အခြား Solana နှင့် EOS ကဲ့သို့သောစီမံကိန်းများကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ အကယ်၍ သူသည်သူ...
2021-06-20 03:33:46 | ဘလောက်...
Bitcoin ကိုတရားဝင်တင်ဒါအဖြစ်အသုံးပြုရန်အသွင်ပြောင်းရာတွင်အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ၏တောင်းဆိုချက်ကိုကမ္ဘာ့ဘဏ်ကပယ်ချခဲ့သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကွာဟချက်များကိုပါ ၀ င်ပတ်သက်ခြင်းမရှိကြောင်းဈေးကွက်ခေါင်းဆောင်များကအယ်လ်ဆာဗေးဒေါနိုင်ငံသည် Bitcoin ကိုလက်ခံသည့်အတွက်နိုင်ငံတက...
၂၀၂၀ တွင်ဗြိတိသျှများကအစုရှယ်ယာများထက် Cryptos ကိုဝယ်ယူခဲ့သည် - အစီရင်ခံစာ
2021-06-20 03:32:18 | ဘလောက်...
မကြာသေးမီကပြုလုပ်သောစစ်တမ်းတစ်ခုအရဗြိတိန်နိုင်ငံသား ၇ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၂၀၂၀ တွင် cryptos ကို ၀ ယ်ယူခဲ့ကြပြီး ၅% မှာရှယ်ယာများနှင့် ISA စတော့ရှယ်ယာများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ စစ်တမ်းဖြေဆိုသူ ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်အမြတ်ရမရဆိုတာမသေချာကြဘူး။ ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတွေဟာစတော့ရ...
PRIVACY အကြွေစေ့သည်တတိယမြောက် ၃၆,၀၀၀% ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာသည်။ စတုတ္ထအကြီးဆုံး crypto ဖြစ်လာသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အမှန်တကယ်ပြုလုပ်ခဲ့သလား။
2021-06-20 03:27:12 | ဘလောက်...
PRIVCY အကြွေစေ့သည်နေ့စဉ် ၀ င်ငွေစံချိန်တင်မြင့်တက်စေရန်နေ့ချင်းညချင်း ၃၆, ၀၀၀, ၀၀၀% ကျော်တက်ခဲ့ပြီးဒေါ်လာ ၅၇ ဘီလီယံကျော်ထိခဲ့သည် CoinMarketCap အရ ဒီစျေးကွက်ထဲတွင် PRiVCY သည် Binance Coin, Cardano နှင့် Dogecoin ထက်ကြီးသည်။ သို့သော်အမှန်တကယ်မြင့်တက်လာသလား bug လား? cryptocurrency စျေးကွက်သည်ရုတ်တရက်နှ...
ဒီဇိုင်းကြောင့်အားနည်းသွားသည် 2G မိုဘိုင်းကွန်ယက်ကိုစာဝှက်ခြင်း
2021-06-20 02:59:45 | မင်္ဂလာပါ...
သုတေသီများက 2G ကွန်ယက်များတွင် GPRS ဆက်သွယ်မှုအတွက်အသုံးပြုသော encryption algorithm သည်တမင်တကာအားနည်းသွားပြီးဆက်သွယ်ရေးစာဝှက်ဖြည်ခြင်းအတွက်လမ်းခင်းပေးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် ၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည့် ETSI သည်ထိုအချိန်ကထိုကန့်သတ်ချက်များကိုချမှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုပယ်ဖျက်သည်။ ...
2G မိုဘိုင်းကွန်ယက် encryption သည်တမင်တကာလျော့နည်းသွားသည်
2021-06-20 01:44:44 | မင်္ဂလာပါ...
အဘယ်ကြောင့်ငွေဖြစ်လွယ် foreclosure cryptocurrency များအတွက်အရေးကြီးပါသည်
2021-06-19 19:02:41 | ဘလောက်...
Cryptocurrency အတွက် Liquidity Lockdown သည်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးရသနည်း Cryptocurrency အတွက် Liquidity ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာ့ကြောင့်ပိတ်ချင်တာလဲဆိုတာကိုစတင်လေ့လာကြပါစို့။ Liquidity ဆိုတာရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင် developer တွေအတွက် crypto tokens ကိုတီထွင်သူတွေလုပ်တဲ့ရန်ပုံငွေတွေပေါ့။ ချက်ချင်းရောင်းရန်နှင့်ရော...
အုပ်စုလိုက် Paraguayo က de maintenimiento aceptará criptomonedas desde julio
2021-06-19 17:01:50 | ဘလောက်...
Cinco အုပ်စုသည်အဓိကကျသောနေရာများဖြစ်သောပါရာဂွေးနိုင်ငံ၏အထင်ကရဆေးဘက်ဆိုင်ရာအထူးပြုဌာနများဖြစ်သည်။ ဒေသဆိုင်ရာ ၂၄ ခု၊ လေယာဉ်ပျံများ၌လေယာဉ်ပျံတက်ခရင်မ်များ၊ အီတီ၊ ချီလီနိုင်ငံသားများနှင့်ဒေသဆိုင်ရာ ၂၄ ခု၊ Santiago Sosa နှင့် Rodrigo Nogues Bazan မှ CoinDesk. La သည်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်စင်ကာပူနိုင်ငံမျာ...
စီချွမ်ပိတ်သိမ်းဖို့ Bitcoin မိုင်းလုပ်သားအမိန့်
2021-06-19 16:58:23 | ဘလောက်...
အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကော်မရှင်၏စီချွမ်ဌာနခွဲနှင့်စီချွမ်စွမ်းအင်ဗျူရိုသည်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ crypto သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများအားဖိနှိပ်ရန်အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ဟု CoinDesk မှရရှိသောနှင့်အတည်ပြုသောထင်မြင်ချက်အရသိရသည်။ အကြီးဆုံးရေအားလျှပ်စစ်အခြေပြုစီချွမ် တရုတ်နိုင်ငံရှိ cr...